Saamiyada Apple Inc. maanta, qiimaha AAPL stock online hadda, wadaag qiimaha Apple Inc..
AAPL = 143.11 US dollar
+5.52 USD (+3.86%)
Wuxuu muujiyaa qiimaha saamiyadii ugu dambeeyay ee Apple Inc. ee US dollar. Macluumaadka ku saabsan isweydaarsiga saamiga saamiga ee laga helay ilo furan. Macluumaadka qiimaha saamiga waa tixraac. 1 saamiyada Apple Inc. kor u kacay 5.52 US dollar. Apple Inc. wuxuu kacaa qaraabo ah US dollar ilaa shalay. Qiimaha 1 saamiga ah ee Apple Inc. "wuxuu hadda la mid yahay 143.11 saamiga US dollar.
Apple Inc. qiimaha saamiga ee shirkadda US dollar
Usbuuc ka hor, Apple Inc. waa lagu iibin karaa 149.24 US dollar. Lix bilood ka hor, Apple Inc. waxaa laga iibsan karaa 161.41 US dollar. Sanad ka hor, Apple Inc. waxaa lagu badali karaa 124.61 saamiga US dollar. Qiimaha saamiga Apple Inc. gudaha US dollar waxaa lagu arki karaa shaxda. -4.11% usbuucii - isbedelka sicirka saamiyada ee Apple Inc.. Sannadka oo dhan, Apple Inc. gudaha US dollar sicirka saamiga ayaa is beddelay 14.85%.
Qodobbada saamiyada Apple Inc. US dollar
AAPL In US dollar (USD)
1 AAPL 143.11 US dollar
5 AAPL 715.55 US dollar
10 AAPL 1 431.10 US dollar
25 AAPL 3 577.75 US dollar
50 AAPL 7 155.50 US dollar
100 AAPL 14 311 US dollar
250 AAPL 35 777.50 US dollar
500 AAPL 71 555 US dollar
Waad ku badali kartaa 10 saamiga Apple Inc. ee loogu talagalay 1 431.10 US dollar. Hadaad leedahay 25 saamiyada of Apple Inc., ka dibna gudaha British Virgin Islands waa lagu badelayaa 3 577.75 US dollar. Maanta, 7 155.50 US dollar waa la iibsan karaa 50 saamiyada of Apple Inc.. Waad ku iibin kartaa 100 saamiga Apple Inc. ee loogu talagalay 14 311 US dollar. Beddelka jawaabta saamiga maantu waxay siisaa 35 777.50 US dollar oo loogu talagalay 250 saamiga Apple Inc.. Ka-beddelka saamiyada hadda wuxuu siinayaa 71 555 US dollar oo loogu talagalay 500 saamiga Apple Inc..
AAPL taariikhda qiimaha saamiyada
17/05/2022 149.24 USD -
Maanta 143.11 USD = 500 saamiga AAPL. Apple Inc. ee US dollar ee 20 May 2022 wuxuu la mid yahay 137.59 US dollar. 19 May 2022, 1 saami ah oo ah Apple Inc. kharashyada 137.35 US dollar. Apple Inc. ee US dollar ee 18 May 2022 wuxuu la mid yahay 140.82 US dollar. Ugu yar AAPL / Heerka USD heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 19/05/2022.
Hal qayb oo ka mid ah Apple Inc. maanta waxay u taagan tahay 143.11 $. Qiimaha AAPL ayaa isbeddelay ilaa +3.86% ama +5.52 USD tan iyo maalintii ugu dambeysay ee ganacsiga. Waxaad ka iibsan kartaa 100 saamiyada Apple Inc. ah 14 311 US dollar ama iibin 50 saamiyada AAPL ee 7 155.50 US dollar.
Apple Inc. waa naqshadeynta, soo saarida iyo suuqyadda isgaarsiinta mobile-ka iyo qalabka warbaahinta iyo kombiyuutarada gaarka ah, oo iibiya noocyo kala duwan oo software ah, adeegyo, qalabyo, xalka isku-xirka iyo sadexda dhinac ee xisaabta iyo codsiyada.